Wuu Geeriyooday, 78 Daqiiqadood ayuu Meyd ahaa! – Laacib Xabaasha Ka soo Ag Noqday oo Hadlay! | Aftahan News
Wuu Geeriyooday, 78 Daqiiqadood ayuu Meyd ahaa! – Laacib Xabaasha Ka soo Ag Noqday oo Hadlay!
aftahannews (Sports):- Fabrice Muamba waa tusaale nool. Waxa uu ku badbaaday si mucjiso ah sababtuna waa in aanay waqtigiisii adduunyadu dhamaanin oo Illaahay uu maalin kale u dhigtay geeriyidiisa.
Waqtigii nasashada ayaa la gaadhay, garoonka ayaa lagu soo noqday, aragtidiisa ayaa diciiftay, hortiisa markii uu eegayna waxa uu arkay laacibkii ka horreeyey ee Scott Parkers oo laba qof ah.
Waxa dhegihiisa kusoo dhacayay dhawaaqa difaaca Bedrych Boyata oo weydiisanaya inuu dib usoo noqdo, laakiin umuu jawaabi karaynin. Ilbidhiqsiyo kaddib indhaha ayaa dam yidhi oo madoobaaday, waxna wuu arki waayay.
Fabrice Muamba intaas kaddib dhulka ayuu yaallay iyadoo ay daawanayaan in ka badan 35,000 qof oo garoonka fadhiyey.